မင်္ဂလာပါ Lo Blackjack
Blackjack သင့်ရဲ့ပုံမှန်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုလှည့်ကွက်အတွက်ယူလာမင်္ဂလာပါ Lo Blackjack ဖြစ်ပါသည်. ဒီ add-on အင်္ဂါရပ်ကိုသင်ဖဲဝေသူကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခံရဖို့ကဒုတိယကဒ်၏တန်ဖိုးကိုအပေါ်အလောင်းအစားပေးနိုင်ပါတယ်. သင့်အနေဖြင့်ပထမဦးဆုံးကတ်ကိုတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးကိုသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းတန်ဖိုးဖြစ်ဖို့ကအလောင်းအစားစေခြင်းငှါလည်းကောင်း. ဤအရာကယ့်ဂိမ်း impact ပါဘူးနေစဉ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အနိုင်ရရှိမှအပေါ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာဂိမ်းရဲ့ RTP အပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်.
မင်္ဂလာပါ Lo Blackjack ၏ရေးသားသူအကြောင်း
NYX-အတိုငျးကတီထွင်, မင်္ဂလာပါ Lo Blackjack နှစ်ခုဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲကုမ္ပဏီတွေရဲ့မိတ်ဖက်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါနှစ်လုံးကိုဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက်စုဝေးရောက်လာကြ၏ 2015 ပြီးတော့ကတည်းကအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းထွက်ပေးကမ်းခဲ့.
မင်္ဂလာပါ Lo Blackjack တစ်ဦးကြိုဆိုလှည့်ကွက်နှင့်အတူ Blackjack သင့်ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဒီ add-on တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်. ရှုပ်ထွေးဘာမှမရှိဘူး. အဆိုပါမင်္ဂလာပါ Lo အလောင်းအစား feature ကိုရိုးရိုးဂိမ်းမှပျော်စရာထည့်သွင်း. ကဒ်များပုံမှန်အတိုင်းခြောက်ခုကုန်းပတ်နှင့်ကစားနည်းနှင့်အတူ, သင်သိလိုသည်အတိုင်းဂိမ်းအပေါ်တတ်. သငျသညျနေရာချချင်အလောင်းအစား၏တန်ဖိုးအပေါ် မူတည်. အချစ်ပ်ကို Select လုပ်ပါ, နှင့်လည်းသင်လိုကစားနည်းကစားရန်. ပြီးတာနဲ့ပြုသောအမှု, ဂိမ်းကိုစတင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း button ကိုဝင်တိုက်.
မင်္ဂလာပါ Lo Blackjack စဉ်အတွင်းသင် play ထိုကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒီမှာ, ကစားသမားကိုပထမဦးဆုံးကတ်များစားပွဲပေါ်တင်လိုက်တယ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဖဲဝေသူကရေးဆွဲမည်ဖြစ်ကြောင်းဒုတိယကဒ်၏တန်ဖိုးကိုအပေါ်အလောင်းအစားတစ်ခုအခွင့်အလမ်းရရှိသွားတဲ့. ယခု, ကစားသမားမြင့်မားသို့မဟုတ်အနိမ့်ရှေးခယျြဖို့ရှိပါတယ်ဖြစ်စေ, ကြောင်း, သင်ပထမဦးဆုံးကတ်ကိုထက်ဒုတိယကတ်ကိုတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားတစ်ခုသို့မဟုတ်အနိမ့်တန်ဖိုးဖြစ်လိမ့်မည်ရှိမရှိခန့်မှန်းရန်ရှိသည်. သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာခန့်မှန်းခဲ့လျှင်, ထို့နောက်သငျသညျခကျြခငျြးကပေးဆောင်ရ. သောအခါစုစုပေါင်းအခြားအနိုင်ရမြင်ကွင်းဖြစ်ပါသည် 21 ဒုတိယကတ်ကိုသူ့ဟာသူအောင်မြင်သည်. ပထမဦးဆုံးကတ်ကိုတစ်ဦး Ace ကိုကြီးလျှင်တစ်ဦးက Push ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, ဒုတိယလည်းတစ်ဦး Ace ကိုဖြစ်ပေါ်. ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်ဒုတိယကတ်ကိုတစ်ဦး Ace ကိုပါလျှင်အဆိုပါကစားသမားအလောင်းအစားဆုံးရှုံးလိမ့်မည်, ဒါမှမဟုတ်ခန့်မှန်းမမှန်ကန်လျှင်.
ထိုမင်္ဂလာပါ Lo အလောင်းအစားကျော်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, Blackjack ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၏ပုံမှန်အစည်းအဝေးဂိမ်း. စုစုပေါင်းရယူခြင်း 21 ဂိမ်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကိုသို့မဟုတ်ပိုမိုနီးကပ်စွာ.
၏ RTP နှင့်အတူ 99.92%, မင်္ဂလာပါ Lo Blackjack ပုံမှန် Blackjack ၏အံ့သြဖွယ်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးလောင်းကစားရုံဂိမ်းအတွက်အချို့သောအပိုဆောင်းပျော်စရာရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်.